भाँजो हाल्ने साथीहरु बाहिरिए, अब विवेकशील साझा पार्टीले गति लिन्छ : केशव दाहाल
Wednesday, 16 Jan, 2019 11:33 AM
नेपालमा पुरानो शोच र शैली भएका पार्टीबाट मुलुकमा परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने उद्घोषका साथ गठन भएको विवेकशील साझा पार्टी केहीदिन अघि बिभाजित भयो । एकताको दुई बर्ष नपुग्दै आफुलाई वैकल्पिक धार ठान्ने पार्टीको विभाजनले धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । आफुलाई आदर्श र निष्ठाको पर्याय ठान्ने नेताहरुको बाहुल्य भएको पार्टीभित्र यति चाँडै विभाजनको विउ कसरी रोपियो ? यसै विषयमा विवेकशील साझा पार्टीका योजना तथा अनुगमम प्रमुख केशव दाहालसँग न्यूजसेवाले गरेको कुराकानी :
विवेकशील साझा पार्टीमा यति चाँडै विभाजन कसरी आयो ?
म विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी मिलेर विवेकशील साझा पार्टी बनेपछि यो पार्टीमा प्रवेश गरेको हुँ । मेरो अनुभव के रह्यो भने दुईवटा पार्टी मिलेको प्राविधि रुपमा त देखियो तर बैचारिक, सांगठनिक, सांस्कृतिक रुपमा खासमा यि दुईवटा पार्टी मिलेकै थिएनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहारण तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ । विवेकशील दलबाट १६ जना साथीहरु थिए केन्द्रीय समितिमा । बाहिरिँदा पनि १६ जना नै संगै जानुभयो । यदि एकीकरण जीवन्त थियो भने कि त १३ जना कि त २० जना साथीहरु बाहिरिन्थे होलान नि ? जति हुनुहुन्थ्यो स्वाट्टै जानुभयो । १७ महिना, उहाँहरु दुईवटा पार्टीकै रुपमा सँगसँगै हिँड्नुभयो । अहिले वाहिरिनुभयो । यसले के पुष्टि गर्छ भने उहाँहरु वैचारिक, सांगठनिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि एकीकृत हुनुभएको थिएन ।
यति धेरै मतभेद सुरुमै रहेछ । त्यस्तो हो भने यि दुई दलको एकीकरण सुरुदेखि नै औचित्यहिन थियो ?
एकीकरण औचित्यहिन थियोजस्तो मलाई लाग्दैन । एउटा नयाँ राजनीतिक अभिष्ट प्राप्त गर्नको लागि उस्तै–उस्तै दृष्टिकोण राख्ने पार्टीहरु एकीकृत हुन आवश्यक छ । अझै पनि वैकल्पिक पार्टी भन्नेहरु, समुहहरु, नयाँ,सफा र पछिल्लो पुस्ताको राजनीति चाहिन्छ भन्नेहरु एकीकृत हुनै पर्दछ । तर मूल प्रश्न के हो भने, दुईवटा पार्टी एकीकृत हुँदा त्यो एकीकरणलाई साँच्ची जीवन्त एकीकरणको रुपमा लैजानको लागि कति संवाद भयो ? कति वैचारिक, राजनीति र सांगठनिक काम भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । उहाँहरु एकीकृत त हुनुभयो । दुईवटा पार्टी एउटा बन्यो । विवेकशील साझा पार्टी । त्यो राजनीतिक हिसावले एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता थियो । त्यसैले त्यो सही थियो । तर, त्यो सही चिज र परिघटनालाई राजनीति, वैचारिक, सांस्कृतिक हिसावले सुदृढ गर्नको लागि नेतृत्वले जुन किसिमको योगदान गर्नु पर्दथ्यो त्यो गरेको देखिएन । दुईवटा पार्टी त मिले आखिर दुई धारको रुपमा सँगसँगै अगाडि बढिरहे । मिसिएन ।
उज्वल थापाहरु अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने पार्टीलाई एकलौटी ढंगले चलाउन खोजियो । आन्तरिक प्रजातन्त्र भएन । निर्णयहरु थोपर्ने काम भयो । त्यसैले बाध्य भएर अलग्गिनु पर्यो भन्नु हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई तपाईहरुले किन पुर्याउनु भएको ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । एकलौटी ढंगले संचालन गर्ने भनेको के ? पार्टीमा दुईवटा संयोजक हुनुहुन्थ्यो । दुइवटै संयोजकको जिम्मेवारी विधानले र दुईवटा पार्टी एकीकरण हुँदा बनाइएको संम्झौतापत्रले निर्देशित गरेको छ । त्यसपछि पार्टीमा संयोजन समिति थियो जसले केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्दा पार्टीका नियमित कामहरु र पार्टीको राजनीतिक गतिविधि बढाउन निर्णय लिने गर्दथ्यो । त्यसपछि हरेक महिनाको पहिलो बिहिबार नियमित रुपमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दथ्यो जुन बैठकमा नयाँ निर्णयहरु पनि हुन सक्थ्यो । संयोजन समितिले गरेका निर्णयहरु पनि जान सक्थे । त्यो समग्र पार्टी निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा खुला छलफल हुन्थ्यो । एजेन्डाहरु पहिले नै सार्वजनिक हुन्थ्यो । बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि सदस्यहरुलाई पहिले नै उपलब्ध गराइन्थ्यो । बैठकमा साथीहरुले आफ्नो मत राख्नु हुन्थ्यो र निर्णय गरिन्थ्यो । हरेक निर्णय हुँदाखेरी बैठकमा सहभागी हुने अनि एउटा खास प्रक्रियाबाट निर्णय हुँदा त्यो मेरो निर्णय होइन भनेर भन्नुहुन्छ र अहिले बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्थ्यो, हामीलाई पेलिन्थ्यो भन्ने ? त्यो त राजनीतिक कुरा भएन ।
निर्णय त कुनै न कुनै हिसाबले छलफलबाट हुनै पर्छ । निर्णयको हलो अड्कियो भने त्यसलाई निष्कर्षमा लैजाने भनेको बहुमतकै कुरा होला । र त्यो लोकतन्त्रको एउटा कडी पनि हो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ पार्टीभित्र हरेक एजेन्डामा चुनावै हुने । अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय हुने अवस्था थिएन । कतिपय निर्णयहरु सहमतिमा एकमतको साथ गरिएका छन् । त्यसैले अल्पमत र बहुमत । फलानोले पेल्यो र ‘मार्जिनलाइज’ भयौं भन्ने होइन । योसँगै जोडिएको अर्को विषय के हो भने पार्टीमा को कति गतिशील थियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । स्वभाविक हिसावले पार्टी संचालनमा, निर्णय प्रक्रियामा गतिशील मानिसहरु प्रभावि हुन्छन् ।
अब पार्टी बैठकमा नआउने । पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी नहुने । पार्टी बैठकमा आउँदा पनि एक घण्टाको समय लिएर आउने र पुरा बैठकमा नबस्ने । बैठकमा बोल्दै नबोलेर चुपचाप सबै सिनहरु हेरेर बाहिर निस्की आफ्ना टिप्पणीहरु सार्वजनिक गर्ने अनि बैठकमा मेरो सहभागिता भएन । कुरा राख्न पाइन भनेर भन्ने हो भने त त्यसको के अर्थ हुन्छ र ?
पुरानो सोच र शैलीका दलहरुबाट परिवर्तन सम्भव छैन भन्नु हुन्थ्यो । तर तपाईहरुको पार्टीभित्र पनि अवस्था त त्यस्तै रहेछ ?
पुरानो सोच, शैलीका पार्टीहरुबाट अब नेपाली जनताका पछिल्ला सपनाहरु पुरा हुँदैनन् त्यो कुरा स्पष्ट छ । त्यो के भनेको भन्ने कुरा फरक छ । एउटा राजनीतिक पार्टीले पुराना सोच, शैली र ढाँचाहरुबाट नेपाली जनताका पछिल्ला समस्याहरु सम्बोधन हुँदैनन् भन्नुको अर्थ पुराना विचारबाट सक्दैनन् भनेको हो । पुराना संगठन, शैली, एजेन्डा र नेतृत्वबाट हुँदैन भनेको हो । पुरानो संस्कृति र कार्यप्रक्रियाबाट हुँदै भनेको हो । हामी विवेकशील साझा पार्टी निर्माण र आजसम्म आइपुग्दा हामीले बैचारिक र सांगठनिक हिसावले जे भन्यौ एजेन्डको हिसावले जे भन्यो त्यसले के पुष्टि गर्छ भने पुरानले हु्ँदैन हामी नयाँ राजनीतिक धार र पार्टी बनाएर जानको लागि एकदमै स्पष्ट त प्रतिवद्ध छौं ।
दुई बर्ष नवित्दै पार्टी विभाजित भएको छ । जाने साथीहरुले पनि तपाईहरुमाथि आरोप लगाइराख्नु भएको छ । तपाईहरुको पनि त्यस्तै आरोप सुनियो । एक अर्कोको कमी–कमजोरी खोतलिँदै छ । अब त जनताले तपाईँहरु माथि कसरी विश्वास गर्ने ?
हामी आरोप–प्रत्यारोपमा जान चाहँदैनौं । हामीले स्पष्ट भनेको छौं, एउटा दुःखद घटना भयो । यो घटनाले नेपाली जनता, नेपाली युवाहरु र एउटा नयाँ राजनीतिक धार बनोस् सफा राजनीतिको अभियान चलोस, बैकल्पिक राजनीति स्थापित होस् भनेर चाहने हाम्रा शुभेच्छुक र मतदाताहरुमा निश्चय नै दुःख छाएको छ । यो दुःखद अवस्था हो । तर यो सबै भइरहँदा पनि हामीले के भनेका छौं भने इतिहासले भोलि मुल्याँकन गर्ला को ठीक थियो को बेठिक थियो भनेर । यहि घटनालाई लिएर हामी एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप, हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने पक्षमा छैनौं ।
हामी संस्थापनको हिसावले अगाडि बढिरहेका छौं । उहाँहरुलाई शुभकामना दिन चाहन्छौं । तर शुभकामना दिइरहँदा हामीले भन्ने कुरा के हो भने राजनीतिक दल र धार निर्माण गर्ने कुरा अहिले बृहत्तर राजनीति अभियान हो । यो वैचारिक अभियान हो । संगठनमा नयाँ प्रयोग गर्ने अभियान हो । यो नेपाली जनताका पछिल्ला सपनाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि सही एजेन्डा बनाउने अभियान हो । त्यसैले गर्दा यो अभियानमा उहाँहरु जसरी हिँड्दै हुनुहुन्छ । सानो क्लब जस्तो मोडलमा । थोरै मान्छेहरु संगठित हुने । आफुआफुबीचमा सिमित घेराभन्दा बाहिर नजाने । अथवा सहर र राजधानी केन्द्रीत हुने । यो भन्दा बृहत्तर सोच बनाउनुहोस् । बृहत्तर राजनीति हस्तक्षेपको सोच बनाउनुहोस् । र एउटा सुन्दर पार्टी बन्यो भने अहिलका यि असन्तुष्टि र हिलो छ्यापाछ्याप भन्दा अगाडि बढेर काम गर्नुभयो भने हाम्रो शुभकाना छ ।
पछिल्लो समयमा त तपाईहरुको राजनीति गतिविधि पनि निकै सुस्त देखियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हस्तक्षेप गर्ने कुनै भूमिका देखिएन । यति साह्रै किन सुस्ताउनुभएको ?
एकीकृत हुँदाको अवस्थामा हामीलाई अलिकति अफ्ठेरो थियो । निर्णय गर्ने र संगठनको गति हाँक्ने कुरामा । केही नयाँ मान्छेलाई पार्टीमा आमन्त्रण गर्ने र जिम्मेवारी दिन संकट थियो । छुट्टिएर जाने साथीहरुले जहिले पनि अफ्ठेरो पार्नुहुन्थ्यो । खासगरी हरेक विषयमा भाँजो हाल्ने । संगठन विस्तार अभियानमा हामीहरु ले हरेक केन्द्रीय सदस्यहरुले ९० दिनको जिम्मेवारी लिएर जनताको बीचमा जाउँ भन्यौं । त्यो काम गर्नको लागि केन्द्रीय साथीहरु क–कस्ले कति समय उपलब्ध गराउनु हुन्छ । भनेर सोध्यौं कोही साथीहरुले पनि ९० दिनको समय दिनलाई तयार हुनुहुन्नथ्यो । हामीले भन्यौ, पार्टीमा एक नम्बर प्रदेशमा संयोजक नियुक्त गरौं । किनभने प्रदेश संयोजक नियुक्त भइसकेपछि त्यहाँ एउटा केन्द्र बन्छ र हाम्रो राजनीतिक अभियानलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्छ भन्यौ । उहाँहरुले हरके पटक त्यो निर्णय गर्नका लागि भाँजो हाल्नुभयो । हामीले भन्यौ, केही साथीहरु केन्द्रीय समिति थपौं । त्यसमा उहाँहरु कहिल्यै पनि उत्साहित हुनु भएन ।
एउटा गतिमा अगाडि बढ्यौँ। ठ्याक्क एउटा विषय आउने अनि सोचेको गति नै रोकिने । त्यही विषयको वरिपरी फेरी बहस चल्छ । स्वयम् उज्वल थापा अथवा अरु साथीहरु जसलाई विश्वास गरिएको थियो । आशा थियो । उहाँहरु पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पटक्कै अग्रसर हुनु भएन । त्यसैले यो पार्टी अलि सुस्ताएको हो कि भन्ने देखियो तर कहिलेकाँही फुटले पनि शक्ति दिन्छ । यो फुट दुःखद हो । यद्यपि यो फुटले शक्ति दिनुपर्छ । यो घटना पछि पार्टीलाई जीवन्त बनाउन खोज्नेहरुलाई बाटो खुलेको छ । जो साथीहरुले पार्टीमा गाँठो पार्नुभएको थियो । गाँठो पार्ने र फुकाउनेहरुको बीचमा पार्टीभित्र जुन द्वन्द्व थियो त्यो सकिएको छ । गाँठो खोलेर अगाडि जाने साथीहरुले उत्साहाका साथ एउटा नयाँ जोश, उमंग र शक्तिका साथ अगाडि जाने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ।
तपाईहरुको पार्टी विवेकशील साझा पार्टीकै रुपमा रहन्छ या भोलि अन्य कुनै राजनीतिक दलसँग पनि एकीकृत हुने संभावना छ ?
नेपाली जनताका पछिल्ला एजेन्डा सम्बोधन गर्न चाहने वैकल्पि पार्टी, समुह अथवा यस्ता व्यक्तिसँग सहकार्य गरेरै नेपालमा वैकल्पिक राजनीति आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पु¥याउने हो । त्यसैले हामी एकीकरणको कुरा गर्दा संवाद, सहयकार्य र अन्ततः सबै कुरा मिल्यो भने एकीकरण गर्नको लागि तयार छौं । तर तयार छौं भनिरहँदा हामीले एकदमै हतार गरेर । एउटा राजनीतिक पार्टीले विचार गर्नुपर्ने विचारको पक्ष , संगठन, इतिहासमा विचारै नगरिकन एकीकरण गर्छौ भन्ने चाँही होइन ।